Golaha Wasiiradda Jubbaland oo ansixiyey heshiis Wasaaradda Dekadaha iyo Gadiidka Badda lagashay shirkada gaar loo leeyahay. | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Kismaayo- SONNA)-Madaxweynaha Dowladda goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam, ayaa shir gudoomiyey kulanka golaha wasiiradda Jubaland oo maanta lagaga hadlay qodobo kale duwan.
Kulanka waxaa ugu horeyntii Madaxweynaha golaha uga warbixiyey xaaladda guud ee dalka iyo arimaha doorashooyinka oo xiligan lagu guda jiro sidii losoo dhameeystiri lahaa xubnaha kamid noqonaya kuraasta aqalka hoose ee barlamaaka Soomaaliya.
Wasaaradda Caafimadka ee Dowladda goboleedka Jubaland ayaa kawar bixisay xaalada caafimadka ee deeeganada Jubaland, waxa ay golaha usoo gudbisay in wali ay taagantahay xaalada Covid-19 isla markana ay wadaan wacyi galinta bulshada iyo dadaalada ay xanuunkan ku xakamaynayaan.
Wasaarada Amniga Dowladda goboleedka Jubaland ayaa golaha usoo gudbisay warbixino la xiriira amaanka deegaanada Jubaland. waxa ay sheegtay in feejignaan dheeri ah ay ku jiraan laamaha amniga maadaama uu dalku kujiro doorasho kooxaha dhagar-qabayaasha ay isku dayayaan sidii ay ku dhibaateen lahaayeen dadka biramageeyada ah.
Previous articleWasiirka Gaashaandhiga XFS oo la kulmay taliye ku xigeenka Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed
Next articleGuddiga qaban qaabada oo shaaciyay xiliga ay qabanayaan doorashada guddoomiyaha gudddiga FEIT